OLUKHETHEKILE: Umshushisi wodumo ubephenywa ngaphambi kokusula | News24
OLUKHETHEKILE: Umshushisi wodumo ubephenywa ngaphambi kokusula
Johannesburg – Sekuvele ukuthi iNhloko yeNational Prosecuting Authority (NPA), uShaun Abrahams, yakhipha umyalelo wokuba kuphenywe umshushisi u-Advocate Gerrie Nel kanye nabanye abashushisi abaphezulu ngaphambi kwezinsuku ezintathu uNel asula emsebenzini.
U-Abrahams wacela umshushisi ophezulu KwaZulu Natali ukuba amnikeze umbiko wakamuva mayelana nesikhalo esafakwa ngoNel kanye nabanye abashushisi abathathu abaphezulu ngokuthela ngehlazo ezokuphathwa kwezobulungiswa.
OLUNYE UDABA: Wesule isigubhukane umshushisi wodumo
INews24 ibike ukuthi uNel ubeyingxenye yesikhalo sikasomabhizinisi waseLaudium, ePitoli, esingaye kanye nabanye abashushisi.
UNel uthuse abaningi ngokusula ngoMsombuluko njengoba esejoyine inhlangano i-AfriForum nalapho ezoba yiNhloko yophiko lwezokushushisa oluzimele lwale nhlangano.
Isikhalo esibhekene noNel sabhaliswa ngomhlaka-20 kuDisemba ngonyaka owedlule, kanti simayelana nezinsolo zokuphazamisa ubufakazi.
Kukhulu ukuqagula emkhakheni wezomthetho ngokuthi uNel ubengaphansi kwengcindezi ku-NPA ngaphambi kokuthi ashiye, sekusele iminyaka emihlanu athathe umhlalaphansi, ngemuva kokuchitha iminyaka engu-36 kulo mkhakha.